YEYINTNGE(CANADA): Sunday, December 20
ဂါရဝပြုပြီးတော့ ခွင့်တောင်းခြင်း၊ ခံယူခြင်းဆိုတာ အလွန်ကျက်သရေ ရှိပါတယ်
'နိုင်ငံရေးလောကဆိုတာ ဖြုတ်၊ ထုတ်၊ သတ်တွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ် ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေတ် ရှိခဲ့တော့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူကြီးသူမများကို ဖယ်ရှားခြင်းတို့၊ သို့မဟုတ်လည်း လူကြီးသူမများကို အနားပေးခြင်းတို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ သိပ်ပြီးတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ သို့မဟုတ်လည်း လိမ်လိမ်မာမာ ထိုက်သင့်တဲ့ ဂါရဝတရား မရှိဘဲနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။'အဲတော့ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်တဲ့ကိစ္စဟာ အခြား နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ အသာထားဦး၊ လောလောဆယ် NLD အတွက်ဆိုရင် အလွန်ကို ကျက်သရေရှိတဲ့ လုပ်ငန်းပါ။ ဘာပဲပြောပြော အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ အကြံဉာဏ်များကို ဂါရဝပြုပြီးတော့ ခွင့်တောင်းခြင်း၊ ခံယူခြင်းဆိုတာ အလွန်ကျက်သရေ ရှိပါတယ်လို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။ http://ifile.it/6l8z4rdNld Need to Meet Dassk Summary only...
Oway No5Pcversion Summary only...
Burma or Myanmar? Burmese or Burman? Rangoon or Yangon?
http://ifile.it/0pcuzyj24041462 Burma or Myanmar Summary only...
The Voice Weekly Journal No.7, Vol 6, December 21-27, 2009.
http://ifile.it/nc1rqwx Voice (6-7) Summary only...
Voice of Burma ( Dec 20 )
http://ifile.it/tpd8mf4VOB741KK Summary only...
http://ifile.it/7kvt1enCopy of DAG.docx1 Summary only...
http://ifile.it/hv5efp9KokoGyi Summary only...
ဂါရဝပြုပြီးတော့ ခွင့်တောင်းခြင်း၊ ခံယူခြင်းဆိုတာ အ...
Burma or Myanmar? Burmese or Burman? Rangoon or Ya...
The Voice Weekly Journal No.7, Vol 6, December 21-...